Hello Nepal News » दिवेश पोखरेल ‘अमेरिकन आइडल’ को टप–२ मा प्रवेश : मार्लान् त बाजी ?
दिवेश पोखरेल ‘अमेरिकन आइडल’ को टप–२ मा प्रवेश : मार्लान् त बाजी ?
संसारकै चर्चित सांगीतिक रियालिटी शो अमेरिकन आइडलमा नेपाली मूलका युवा दिवेश पोखरेल फाइनल प्रवेश गरेका छन् । आयोजकले उपाधि होडका लागि फाइनालिस्टको नाम सार्वजनिक गर्दा दिवेश पनि टप–२ मा पर्न सफल भएका हुन् ।
टप–२ सूची घोषणा भएसँगै अब उपाधिका लागि अनलाइन भोटिङ पनि खुला भएको छ । यी २ जना प्रतिस्पर्धीबाट विजेता घोषणा गरिनेछ । फाइनल चरण सुरु भइसकेको छ । प्रतियोगिताको नियमअनुसार अब फाइनलमा उपाधिका लागि २ प्रतिस्पर्धीले दुई–दुई वटा प्रस्तुत दिनेछन्, त्यसैका आधारमा विजेता छानिनेछ ।
तर, फाइनलका लागि मात्रै १ घन्टाको भोटिङ खुला राखिनेछ । प्रस्तुतिका आधारमा १ घन्टामा सर्वाधिक मत पाउने अमेरिकन आइडल घोषणा हुनेछन् । दिवेशलाई पनि उपाधि दाबेदार प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । नेपाली मूलका युवक भएकाले उनलाई विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले हौसला र सहयोग गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०१:१८